Universal Online TV | महिलाहरु साइबर क्राइमबाट कसरी बच्ने ? महिलाहरु साइबर क्राइमबाट कसरी बच्ने ?
महिलाहरु साइबर क्राइमबाट कसरी बच्ने ?
हाल भएको केही आपराधिक घटनाहरुले महिलाहरुका लागि सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर अनेक प्रश्न उब्जाएको छ ।
भारतको बेगलुरु सहरमा एक महिलाको नाममा नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाएर एस्कर्ट सर्भिस दिने वेबसाइटमा राखियो । त्यसपछि महिलालाई नचिनेका व्यक्तिहरु बारम्बार फोन गर्न थाले । महिलाले यस बारेमा उजुरी दर्ता गराइन् ।
त्यस्तै केही दिन अघि ट्वीटरमा ‘पाकिस्तान डिफेनस’ नामको ह्याण्डलले दिल्लीकी एक युवतीको तस्विरलाई आपत्तिजनक बनायो । यसरी महिलाका तस्विर र निजी जानकारीको गलत ढंगबाट प्रयोग र तयसलाई ट्रोल गरेका घट्नाहरु दिनानुदिन सुन्नमा आउँछन् ।
यस्ता अपराधहरुसँग निरुत्साहित गर्न कानुन बनाइएको छ । तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता महिलाहरुले केही सावधानी अपनाए यस्ता घट्नाबाट जोगिनुका साथै सुरक्षित तरिकाले सामाजिक सञ्जालमा क्रियाशिल हुन सक्छन् ।
यस बारेमा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जितेन जैनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा केही कुरामा ध्यान दिन सल्लाह दिएका छन् । हामी तिनै कुराहरुका बारेमा यहाँ बर्णन गर्न गइरहेका छौं ।
के गर्ने, के नगर्ने ?
१) सबैभन्दा पहिलो सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निजी तस्विर राख्नु हुँदैन । तपाईका तस्विर कसैलेपनि प्रयोग गर्न सक्छन् ।
२) तर पनि तपस्वर राख्न चाहन्हुन्छ भने आफ्नो फेशबुक एकाउन्टमा प्राइभेसी सेटिङलाई सार्वजनिक नगर्नुस् ।
३) सेटिङ आफ्ना साथीभाई र आफुसँग जोडिएका व्यक्तिहरुले मात्रै हेर्न सकिने बताउनु पर्दछ । जसले गर्दासामाजिक सञ्जालमा राखिएको तस्विरसम्म अपरिचित व्यक्तिको पहुँच हुँदैन ।
४) आफ्नो नामको बारेमा गूगलमा सधै सर्च गरि राख्नुस् । यसबाट तपाईलाई आफ्नो नाम कहाँ र कुन–कुन वेबसाइटमा आउँदैछ भन्ने जानकारी हुन्छ ।
५) यदि कुनै गलत स्थानमा अथवा आफुले अनुमति नदिएको स्थानमा तपाईको नाम देखिए त्यसलाई तत्काल हटाउन भन्नुस् ।
६) अपरिचित व्यक्तिको फेशबुक एकाउण्टसँग आफुलाई नजोड्नु होस । अपरिचित व्यक्तिसँग जोडिदा क्षति हुन सक्छ । प्रोफेशनल मानिसहरुलाई लिंकडइन मा जोड्नु होस । फेशबुकमा उनीहरुसँग जोडिदै नजोडिनु होस ।
७) ट्वीटरमा भुलेर पनि निजी तस्विर अपलोड नगर्नु होस । यो सोशल नेटवर्किङ साइट नभएर ट्वीटिङ प्लेटफर्म हो ।
८) ट्वीटरमा तपाईको अनुमति विना अरुले फलो गर्न नसकिे सेटिङ गर्न सकिन्छ । तर अधिकांश व्यक्तिले यस्तो गर्दैनन् । सेटिङलाई बढीभन्दा बढी निजी गरेर तपाईको एकाउण्ट बढी सुरक्षित रहन सक्छ ।
९) तपाईले कयौं पल्ट कुसैको एकाउण्ट ब्लक गरि दिनुहुन्छ अथवा त्यसका बारेमा रिपोर्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि ब्लक गरिएको व्यक्ति तपाईको एकाउण्टसम्म पुग्न त सक्दैन तर त्यो व्यक्ति अर्को एकाउण्टमार्फत तपाईको एकाउण्टसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।
१०) तसर्थ कुनै अपरिचित व्यक्तिको फ्रेण्ड रिक्वेस्ट स्वीकार्नु अघि यो कुरालाई सधै दिमागमा राख्नु पर्दछ ।
११) यदि तपाई कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने नआत्तिकनै नजिकको प्रहरी चौकीमा यस बारे जानकारी दिनु होस ।
कसरी पत्ता लगाउने नक्कली एकाउण्ट
केही उच्श्रृखल व्यक्तिले युवतीको तस्विर राखेर युवतीकै नाम राखेर फेशबुक एकाउण्ट खोलेका हुन्छन । त्यस्तै नक्कली नाम र तस्विरका साथ पनि फेशबुक एकाउण्ट बनाइएका हुन्छन ।
जितेन जैन भन्छन्, “यस्ता एकाउण्ट पता लगाउनका लागि केही कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ । कसैको फ्रेण्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गर्नु अघि उसको एकाउण्ट राम्रोसँग गर्नु पर्दछ ।’’
उनका अनुसार यस्ता नक्कली एकाउण्टमा रहेका तस्विरहरु एकै दिन राखिएका हुन्छन् । उ केवल तीन–चार ग्रुपसँग मात्रै जोडिएको हुन्छ र १०÷१५ जना मात्रै साथी हुन्छन् । कति पय यस्ता नक्कली एकाउण्टमा फरक–फरक युवतीका तस्विरपनि हुन्छन् । ती तस्विरहरु आपत्तिजनकपनि हुन सक्छन् ।
जितेन जैन भन्छन्, ‘‘प्रोफाइल तस्विर कुनै युवतीको हुन्छ तर ग्यालरीमा उसको एउटापनि तस्विर हुँदैन । न कुनै पोस्ट हुन्छ । यस प्रकारका एकाउण्टबाट जोगिनु पर्दछ ।’’
सोशल स्पेसमा महिलाका साथ हुने आपराधिक घटनाहरुमा क्रिमिनल साइकोलोजिस्ट अनुजा त्रेहन कपूर भन्छिन्, “महिलाहरुले जिन्दगीमा आशा गरे अनुसार महत्व नपाएपछि भचुर्अल दुनियातर्फ झुकाव राख्न थाल्छन् । जहाँ उसको प्रशंसा गर्न मानिसहरु थाक्दैनन् । सेल्फी कै कुरो गर्ने हो भने यसले हामीलाई यस्तो स्थानमा ल्याइ पुर्याएको क छि भर्चुअल दुनियामा त तर्पालाई लाइक मिल्ला तर असल दुनियामा तपाईलाई कसैले सोध्न पनि सोध्दैन ।’’
लाइक र प्रशंसाको चाहनाले मानिसहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा तस्विर राख्न प्रत्साहित गर्दछ र उनीहरुले आफ्नो निजी जानकारी र तस्विर अपलोड गर्ने शिलशिला बढाउने अनुजाको भनाई छ । उनका अनुसार महिलाहरुका साथ यही स्थिति हुन्छ । त्यो बेला उनीहरु आफ्नो तस्विरको दुरुपयोगपनि हुन सक्छ भन्ने कुरा भुलिदिन्छन् ।
अनुजा भन्छिन्, ‘‘मानिसहरुलाई भर्चुअलभन्दा बढी साँच्चैको जिन्दगीमा ध्यान दिन आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रुपमा छोड्न सकिदैन भने सुरक्षाका लागि आइरहेका नयाँ तरिकाहरु अपनाउन आवश्यक छ । यसो गर्दा गर्दैपनि समस्या सिर्जना भए कानुनी सहायता लिनु पर्दछ ।’’